Kooxda Jwxo-shiil, oo Isku Dacwaysay Casmara Qaarkoodna la Xidhay – Rasaasa News
Jan 11, 2011 Eritrea, ethiopia, Kooxda Jwxo-shiil, Ogaden, ogaden peace, ONLF, oo Isku Dacwaysay Casmara Qaarkoodna la Xidhay, Somali
Dubai, Jan 11 [rasaasa] – Xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo Caasmara lagu xidhay, qaarna waraaqihii socdaalka laga qaaday, ka dib kolkii kulankii loogu yeedhay uu noqday mid xal la,aan ah oo uu dhexdooda ka dhamaan waayey khilaaf iyo isqabqabsi.
Kooxda Jwxo-shiil, ee taariikhda xun, ayaa waxaa saddex todobaad ka hore looga yeedhay Caasmara. Xukuumada Caasmara oo mudoba u isticmaali jirtay kooxda Jwxo-shiil, mucaarad ay kula dagaalanto dawlada Itobiya, ayaa waxay damacsanayd in ay halkaas ku dhisto xubno firfircoon uu u sii adeega xukuumada. Waxaanse wali ka dahsoonaa xukuumada Caasmara in dadweynaha Ogadeeniya ay fahmeen iyada iyo kooxda Jwxo-shiil.
Kooxda waxaa diiday in ay Caasmara tagaan xubnaheedii muhiimka ahaa oo dhan ee Joogay Waqooyiga Maraykanka, marka laga reebo labo xubnood. Kooxdu waxay Eritrea gaysay dad ma kas ah oo ay ka soo uruurisay Yurub iyo wax yar oo ay ka keentay Waqooyiga Maraykanka.
Kooxda ayaa waligeedba, dhaxdeeda u qaybsanayd laba madax oo ishaysa.
Sida aanu warka ku helay madax ka mida ayaa waxa uu doonayey in uu helo hogaanka kooxda, ka dibna ay heshiis xaal mastuur ah la galaan dawlada Itobiya.
Hadaba, kolkii ay kulamo dhawr goor kooxdu ku heshiinwayday wax talo ah, ayaa waxaa soo dhexgashay xukuumada caasmara. Dabadeedna, Jwxo-shiil, ayaa saraakiisha Eritrea farta ugu fiiqay dad dhawra oo uu ka mid yahay Maxamuud Nuur [dhimbil] oo ah xubninka kaliya ee laba ah golihiisa dhexe ah ee ka yimid Waqooyiga Maraykanka iyo dhawr ruux oo aanaan helin magacyadooda.
Waxaa iyagana waraaqihii socdaalka laga qaaday Abtidoon, Cibaado iyo saddex ruux oo aanaan wali magacyadooda helin.
Waxay xukuumada Eritrea diiday in uu ruuxna ka baxo kooxda ilaa iyo amar dambe, waxaana loo sheegay Jwxo-shiil in uu dhiso hogaamadiisa, inta xidhan iyo inta baasaboorada laga qaaday mooyee waxaa kooxda laga caydhiyey Cabdiqaadir Xasan hirmooge [cadaani].
Waxaanu isku dayi doonaa in aan idinla soo socodsiino wixii ka soo kordha xadhiga kooxda Jwxo-shiil.